स्टोर रुमदेखि आर्ट स्टुडियोसम्म शारदा चित्रकार व्यग्रताका साथ केही खोजिरहेकी थिइन् । बुधबार दिउँसो भएजतिका दराज खोतल्दा पनि उनले त्यो वस्तु भेटिनन् । सुन हराए जस्तैको मनोदशामा खोजी भइरहेको त्यो वस्तु के होला ?
थ्रीडी आर्ट : भ्रम कि कला ?
लम्बाइ, चौडाइ र गहिराइ नाप्न नमिल्ने चीज के होला ? उत्तर हो— कला । तर, डिजिटल मिडियाको विकाससँगै कला पनि चारै कोणबाट ‘तौलिन’ मिल्ने भएको छ । डिजिटल वा थ्रीडी आर्टले कलामा नयाँ आयाम थपेको छ ।
‘मलाई थाहा छ, तिमीलाई के चाहिन्छ ?’ यिनै शब्दहरूसहित कालो प्लेकार्ड बोकेर चित्रकार अस्मिना रञ्जित अघिल्तिर उभिइन् । उनको पर्फमेन्स आर्ट हेर्न भेला भएकाबीच कानेखुसी चल्यो । धेरैले धेरैथरी अड्लबाजी गरे ।
सरकारी जागिरबाट निवृत्त ६२ वर्षीय कलाकार डिल्लीकृष्ण आले रंग र कुचीसँग रमाउन थालेको पनि धेरै भइसक्यो । बाल्यकालदेखि चित्रकलामा रमाउने आले जागिरे जीवनमा समेत चित्रकलामा सक्रिय नै थिए ।
२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि उनी आफ्नै घरलाई गुफाजस्तो बनाएर बसे । सार्वजनिक सभा–समारोहमा कतै देखिएनन् । वरिपरि कलाकृति सजिएको, बौद्धको महांकालस्थित बगैंचासहितको बासस्थानलाई नाम दिए— हर्मिताज ।